Ubudoda be-Cannabis Oligopeptide Powder-kwiFektri yoMvelisi
Ubudoda be-Cannabis i-Oligopeptide powder yipeptidi encinci yemolekyuli ekhutshwe kwi-semen cannabis peptides ngobushushu obuphantsi obunzima be-enzymatic hydrolysis. Ityebile kwi-arginine, glutamic acid, histidine, methionine, cystine. Kananjalo ayizukubangela ukuba isisu sihambe, isicaphucaphu kunye neempendulo ezichasayo.
Ubudoda be-Cannabis Oligopeptide Powder yevidiyo
Ubudoda be-Cannabis Oligopeptide Powder Ukucaciswa
Igama lemveliso Ubudoda be-Cannabis Oligopeptide Powder
umbala Mthubi okanye mthubi mthubi
Yintoni iSemen Cannabis Oligopeptide powder?
Okwangoku, isidoda se-cannabis oligopeptide powder sasetyenziswa ikakhulu kwicandelo lokutya kokhathalelo lwempilo kunye nokutya okusebenzayo.
Zithini izibonelelo zamadlozi e-Cannabis Oligopeptide powder?
Yomeleza udakada kunye nenkqubo yokwetyisa
Isidudu se-cannabis i-peptide powder sinokulawula ulungelelwaniso lwezifo zamathumbu, ezinendlela ezimbini zonyango kunyango lokuqhinwa kunye norhudo. Kwangelo xesha, ine-anti-ulcer kunye ne-gallbladder yokukhuthaza iziphumo.
Ubudoda be-cannabis i-peptide powder ineziphumo ezomeleleyo zokuthomalalisa iintlungu.
Nceda kwi-hypolipidemic kunye ne-hypoglycemic
Isidudu se-cannabis i-peptide powder inokunciphisa i-serum iyonke ye-cholesterol kunye ne-triglyceride, kunye namanqanaba eswekile yegazi. Inefuthe lokulawula i-lipids yegazi kunye noshukela wegazi.
Anti-ukudinwa kunye nokuphucula amajoni omzimba
Isidudu se-cannabis peptide powder sinokuphucula ukunyamezeleka komzimba, sandise umxholo we-glycogen yesibindi, sinciphise i-acid ye-lactic yegazi, umxholo we-nitrogen wegazi, unefuthe lokuthothisa; Ukongeza, inokuphucula ngokubonakalayo ukungasebenzi komzimba kwamajoni omzimba, ngakumbi amandla okwanda kwe-Tlymphocyte kunye ne-phagocyte, kunye nokwenza ngcono ukusebenza komzimba kumajoni omzimba.
Ubudoda be-peptide powder yobudoda inomsebenzi we-antioxidant, onokuthi usebenze ngokugqibeleleyo kunye nokunciphisa inqanaba lepididoksayidi, ngaloo ndlela udlale isiphumo sokulwa nokuguga.
 Isifundo seFarmacological seNkqubo yokuDleka kweHemp Kerne
 Ukwenza i-Acupuncture, i-Anti-lnfigueatory, iAntithrombotic Iziphumo zeMbewu yeHemp.
 Iziphumo zeHemao Protein Powder kwiNdawo yezeMpilo kunye neMisebenzi yePhysical of Rats kwiXesha lokukhula.
 Isifundo sokuqala kwi-Anti-fatigue kunye ne-Immune RegulationUkusebenza kweHemp Seed Protein kwiimpuku.
 Umsebenzi we-Antioxidant yee-Enzymatic Hydrolysis Products zeHemp